Umzi-mveliso weSofa | Abavelisi beSofa baseChina, abaXhasi
Ukuphola kuthatha imilo entsha kwigumbi lakho lokuhlala kunye nesofa yaseHollyann. Ukujikeleza indawo yakho enesitayile, edolophini, eli qhekeza lezemidlalo liyinto ethambileyo kunye nemilenze ebushelelezi. Zijikeleze ngentuthuzelo, kwaye ujike ngokwenene uhombiso lwakho lwasekhaya.
I-Kestrel Sofa Chaise
Ihleli nzulu ngenkangeleko yale mihla, le ngqokelela izisa intuthuzelo yokuthoba isoft ethambileyo kwigumbi lokuhlala. Isitshixo sokuma okumnandi kwecandelo yindawo esezantsi evumela indawo eninzi yokuncamathelisa ngezihlalo ezixineneyo, iiseti zomqolo ezixhasayo kunye nokuphosa imithwalo. Iphakanyisiwe kwilinen efana nelinen, icandelo linamacala ebhabhathane kwiifolokhwe ezintle kunye nokucaciswa okucacileyo. Idityaniswe nesihlalo esingenazikhali, ikona, isitulo esingenazingalo kunye ne-ottoman, amacandelo amane e-Crate kunye ne-Barrel ekhethekileyo.
Ngoyilo lokonga indawo kunye nokuguquguquka kwemodyuli, iStrom izisa ukuhlala kwecandelo langoku kumagumbi amancinci nakwindawo yokuhlala. Idityaniswe ikona yengalo yasekunene yengubo yothando kunye ne-chaise engenazandla, la macandelo mabini aphakanyisiwe kwibhasikithi enobubele yosapho ye-plush chenille ngobuninzi bendlela yokuthinta. I-boxy silhouettes kunye nokucoceka okuqinileyo okucocekileyo kuyancedwa yimilenze yesitayile esincinci esenziwe ngombala omnyama ogqityiweyo. Icandelo lamaqhekeza amabini eStrom yiCrate kunye neBarrel ekhethekileyo.
I-Sonoran Block Umlenze weSofa
Ixesha elide, eliphantsi kwaye lenzelwe i-lounging, iPacific iyancedisa amagumbi okuhlala anamhlanje kunye nesitayile sayo esilula, esipholileyo. Isofa elungelelanisiweyo ngokulinganayo ilinganisa umzila wayo omxinwa kunye neengalo ezincinci zomkhondo ngomxube wanamhlanje womqamelo womqamelo, iibholiti kunye nomthungo wesitulo sebhanti. IPacific ihleli ithambile kodwa ingekho nzulu kakhulu, iyenza ilungele indawo yokuhlala encinci. ICrate kunye neBarrel ekhethekileyo, isofa yasePacific yenziwa ngomthi onobunjineli oqinisekiswe liBhunga lamaGosa amaHlathi (FSC), umgangatho wegolide okusingqongileyo wamahlathi alawulwa ngokufanelekileyo.
Wonke umntu umenyiwe ukuba aqokelele. Ukubetha ibhalansi egqibeleleyo phakathi kwentuthuzelo kunye nesitayile sale mihla, Qokelela icocekile-ngaphakathi kwaye ngoku. Isofa eyi-intshi ezingama-98 yaphula umhlaba omtsha ngomgangatho omncinci obeka konke kugxilwe kwi-boxy yayo, izihlalo ezongezekileyo zezihlalo. Ukuthunga okuphezulu kunye nokugcina iingalo ezingenamthungo kugcina ukubukeka kucocekile, hayi ukungxola. Uyilo olukhethekileyo lweCrate kunye noMgqomo, isofa yokuQokelelwa yenziwe ngomthi onobunjineli oqinisekiswe liBhunga lamaGosa amaHlathi (FSC), umgangatho wegolide okusingqongileyo wamahlathi alawulwa ngokufanelekileyo.
Kwisithunzi esimdaka ngombala esingwevu, ilinen yokuluka ilinen yesofti yeCalion izalisa izikimu ezininzi zemibala kunye nobuhle. Iingalo ezivuthayo, ukwamkelwa okubalaseleyo kunye nomqamelo weflamestitch-iiprinta zongeza nje i-panache eyaneleyo kule sofa imnandi nelula. Izihlalo ezixhasayo zenza indawo yokuhlala efanelekileyo.